'नेताको गोजी भर्ने बामपन्थी योजनामा माफियाको सेटिङमै डाक्टर गोविन्द केसीको गिरफ्तारी'
ARCHIVE, BLOG » 'नेताको गोजी भर्ने बामपन्थी योजनामा माफियाको सेटिङमै डाक्टर गोविन्द केसीको गिरफ्तारी'
बामपन्थी हुँ भन्नेहरु भित्र एउटा ठुलो माफियाको गिरोह छ, जसले जादै गरेको कांग्रेसी सरकारलाई अावरणमा देखाएर भित्री रुपमा बामपन्थीभित्रका माफियाको योजना मै डाक्टर के.सी को पक्राउ गरिएको हो । जाँदा जाँदै कांग्रेसले यति ठुलो कम्जोरी गर्न सक्दैनथियो, कांग्रेसलाई अबुझ र निकम्मा साबित गराउंदै बामपन्थीभित्र हुर्किएका माफियाले कांग्रेसी सरकारलाई मानब ढाल बनाइदिए । बामपन्थीको आवरणमा हुर्किएका माफिया निकै चलाख छन भन्ने कुरा अब कांग्रेसले आँखा खोलेर बुझ्नु पर्दछ । बाम सरकार बनी सकेपछी हुने डाक्टर केसीको अभियानलाई केही रोक्नका निम्ती र कांग्रेसलाई अलोकप्रिय साबित गर्दै जनताको मन मस्तिस्कमा कांग्रेस प्रती बित्रिस्ना र घ्रिणा जगाउन बामपन्थी माफियाले आफुलाई अब्बल प्रमाणित गरी सके ।
यो देशमा बलियो भनेका को रहेछन त ? निजी बिद्यालय चलाऊने माफियाहरु र निजी अस्पातल सहित कलेज चलाऊने माफियाहरु नै आजका शक्तिशाली राजनैतीक पार्टीका चन्दादाता हुन । माफियाहरुले सरकारको प्रयोग गर्दै पक्राउ गर्नु त्यती ठुलो बिषय पनि रहेन किनकी सरकार , गुण्डा सबै माफियाकै सेट्टिङमा चल्ने गर्दछन । डाक्टर गोविन्द के.सी ले गर्नु भएको न्यायपूर्ण आन्दोलन माथिको यो आक्रमणले देशको राजनीतिलाई अस्थिर र तरल गराउने गर्दछ ।
राजनीतिको प्रयोग बारे कहिले काही नेताहरु नै अनबिज्ञ हुने गर्दछन । अहिलेको नेपाली राजनीतिमा यस्तै भएको छ । कांग्रेसको सरकार नै डाक्टर गोविन्द के.सी को पक्राउ प्रती असन्तुस्ट भएको समाचारहरु पनि आए । यो पक्राउ हरेक पार्टीका माफियाहरुको एकिक्रित प्र्यास हो । नेताहरुको गोजी भरिदिने माफियाले प्रहारको बाहाना खोजीरहेको र देशको यो संकटपूर्ण अवस्था नै प्रहारको उपयुक्त समय भएको ठम्माइ हो ।
हेर्दा डाक्टर गोविन्द केसीको पक्राउ मात्र देखिए पनि राजनीतिको आवरणमा माफियागिरी गर्नेहरुको यो अन्तिम प्रयास हो । माफियाले राजनैतीक नेत्रित्व लाई किनेर यस्ता घटनाहरु घटाऊने गर्दछन । यो पक्राउ भित्र गम्भिर रहस्य छ जसको उधेस्य एउटा डाक्टर गोविन्द के.सी लाई मात्र साइजमा ल्याउन सके हजार गोविन्द केसीको जन्म रोक्न सकिनछ भन्ने नै हो । माफियाको बिरोध कोही कसैले गर्न नसकुन भन्नका निम्ती कानुनको आधारमा गलाउन खोज्ने माफियाको यो अन्तिम प्र्यास नै हो ।
माफियाले कही कतैबाट केही गर्न नसकेपछी कानुनको व्याख्या गर्दै एउटा सत्य र कर्तव्यनिष्ठ मान्छेलाई फसाउन यस्तो टिक्डम रचेछन । एउटा डाक्टर गोविन्द के.सी लाई समाते हजार गोविन्द के.सी हरु जेल बाहिर सडकमा हुनेछन । गोविन्द के.सी माथिको पक्राउ पुर्जी पूर्ण प्रजातन्त्र माथिको हमला हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि अन्कुश लगाउन मिल्दैन । कहिले पत्रकारिता जगतमाथि श्रोत माग्दै ज्यादाती गर्ने अनी कहिले न्याय पुरुषमाथि न्यायको अवहेलनामा जेल कोच्न खोज्ने अब त अति भो सरकार !
प्रकाशित : Tuesday, January 09, 2018
आज विप्लव नेतृत्वको नेकपाको आयोजनामा नेपाल बन्द ! कस्तो छ प्रभाव ?
जनता बैंकको 'ठगी प्रकरण'मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन, 'आवश्यक कारवाही गरी जानकारी गराउनू'
ह्वातै घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
सनराइज बैंकबाट बिदा हुँदै रत्नराज बज्राचार्य, अप्रिलदेखि बिदामा बस्ने, बैंकिङबाटै बिदा भएर आफ्नै काम गर्ने योजना !
सनराइज बैंकको सीइओ बन्न लक्ष्मण रिसाल अमेरिकाबाट फर्कने चर्चा, बोर्डका अधिकारीसँग पटक-पटक वार्ता
३ डेपुटी सीइओले एकैपटक छोड्ने भए जनता बैंक, अरु कस-कसले छोडे ? को-को छोड्दैछन् ? (नामावलीसहित)